Vaovao - Fitaovana efatra an'ny kodiarana môtô
1. Tohano ny lanja sy ny enta-mavesatry ny vatan'ny fiara:
tohano ny lanjan'ny vatan'ny fiara, ny mpiasa, ny entana, sns., ny habetsahan'ny rivotra sy ny tsindry amin'ny kodiarana mba hanohanana ny lanja sy ny enta-mavesatry ny vatan'ny fiara, noho izany dia zava-dehibe tokoa ny fitazonana ny tsindry rivotra mety.
2 fampitana ny herin'ny mpamily sy ny freins:
raha te handroso na hijanona ny fiara dia ilaina ny mampita ny herin'ny motera sy ny frein mankany ambonin'ny arabe. Amin'ny ankapobeny dia amin'ny alàlan'ny herin'ny fikororohana ny kodiarana kodiarana. Rehefa mihoatra ny fetran'ny fanombohana haingana na ny freins vonjimaika ny fetran'ny kodiarana dia mora ny miteraka tsy fahampian-tsakafo sy fikorisana amin'ny fiara izay mampidi-doza tokoa.
3 Ovao sy tazomy ny làlan'ny fiara:
eo ambany fifehezan'ny Knight, ny fiara mihodina na mitazona mahitsy amin'ny làlana irina. Ity asa ity dia ampiharina indrindra amin'ny alàlan'ny fahasosorana sy ny elastika amin'ny kodiarana kodiarana ary ny fiorenan'ny rafitry ny kodiarana. Raha vantany vao mihoatra ny fetran'ny kodiarana ny hafainganam-pandeha, dia tsy ho afaka hivezivezy amin'ny lalana tiana intsony, izay mampidi-doza tokoa. Noho izany, mba jereo tsara ny hafainganan'ny fiara.
4. Manamaivana ny fiantraikany amin'ny làlana:
Ity ilay antsoina hoe «fampiononana mitondra fiara», izay afaka manamaivana ny fivontosana ateraky ny lalana misavoana. Ity fiasa ity dia amin'ny alàlan'ny habetsaky ny rivotra sy ny tsindry amin'ny kodiarana, ny elastika ao anaty fingotra ary ny fahamendrehan'ny firafitry ny kodiarana. Noho izany, ny tsindry kodiarana dia mety tsy ho avo loatra na ambany loatra. Azafady mba tazomy amin'ny tsindry kodiarana mety.
China Concrete Mixer, Kodiarana PU, China PU Wheel, Sina PU Foam Wheel, Kamio mixer, Caster Wheel,